Xawaareynta xawaaraha | February 2020
Ugu Weyn Ee Xawaareynta xawaaraha
Basasha ama chives: sida loo abuuro iyo daryeelka si ay u koraan dalagga wanaagsan
Chives ama basasha oo jecel in ay koraan halyeeyada fiitamiin hore iyo caleemo casri ah. Jarmalka, magaca "Schnitt" macnaheedu waa "warshad lagu jarayo cagaaran." Si kastaba ha ahaatee, dhaqanka waxaa badanaa koray oo kaliya ma aha in la helo cagaarka baal, laakiin sidoo kale ujeedooyin qurxinta. Chives waxay leedahay lilac-casaan-lakac-casaan ah ubucursiga, kaas oo, ubaxyada bilawga May, waxay awoodaan in ay qurxiyaan wax kasta oo fasax iyo guriga xajmiga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Xawaareynta xawaaraha 2020